Jiake Wire Mesh Machinery ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုမတ်လတွင်လာရောက်ကြည့်ရှုရန်ကြိုဆိုပါသည်
မတ်လတွင်ဂဟေဆော်သည့်ဝါယာကြိုးစက်၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုလေးခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင်၏ Jiake စက်ရုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစက်အကြောင်းသင်ပိုမိုလေ့လာရန်သင့်အားခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ အဓိကဝါယာကြိုးကွက်စက်ပစ္စည်းရှင်းပြချက်, ဝါယာကြိုးကွက်စက်, ကြက်သားလှောင်အိမ်ဝါယာကြိုးကွက်စက်, ch ...
၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်တွင် Hebei ပြည်နယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှထုတ်ပြန်သောစာရွက်စာတမ်းအရကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Hebei ပြည်နယ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှချီးမြှင့်သည့်ပြည်နယ်အဆင့်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce သရုပ်ပြလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၂၄ ခုရှိသည်။
ဆယ်ရက်အတွင်းမှာငါတို့ရဲ့အကြီးဆုံးပွဲတော် - နွေ ဦး ရာသီပါ။ စက်များအားလုံးပြီးသွားသောအခါဖောက်သည်များအနေဖြင့်စက်ကိုအစောပိုင်းရောက်အောင်ကူညီပေးပါမည်။ နောက်သတင်းကောင်းတစ်ခုရှိသေးသည်။ Shijiazhuang ရှိရပ်ကွက်သည်ယခုအခါပိတ်ဆို့ခြင်းနီးပါးရှိသည်။ ငါတို့ကြည့်လို့ရတယ် ...
ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်
ကပ်ရောဂါသည်မည်မျှပြင်းထန်သည်ဖြစ်စေ၊ ကပ်ရောဂါမည်မျှပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဖောက်သည်များအကြားချောချောမွေ့မွေ့ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့မရပ်နိုင်ပါ။ ကပ်ရောဂါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်၌အိပ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အိမ်မှအလုပ်လုပ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုအစေခံနေဆဲဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိကအားဖြင့်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၌အဓိကအသုံးပြုသောစက်ရှိသည်။ ၎င်းမှာဂဟေဆော်ထားသောဝါယာကြိုးကွက်ကိရိယာများကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ကြက်အိတ်များ၊ ယုန်အိတ်များ၊ mink cages များ၊ အခြားထုတ်ကုန်များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြက်သားလှောင်အိမ်ကွက်ဂဟေဆော်စက် ...
ဖောက်သည်အချို့ကကျွန်ုပ်တို့အား“ ငါခြံစည်းရိုးလုပ်ငန်းမှာအသစ်ဖြစ်ပြီ၊ မင်းကိုစတင်တည်ထောင်ဖို့ငါဘာကိုအကြံပြုသလဲ။ ၀ ယ်သူအသစ်အတွက်သင့်တော်သောငွေကြေးမလောက်ပါကအောက်ပါအချက်များကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ ၁။ အလိုအလျောက်ကွင်းဆက်ချိတ်ဆက်ရန်ခြံစည်းရိုးစက်; ဝါယာကြိုးအချင်း: ၁.၄ - ၄.၀ မီလီမီတာ GI ဝါယာကြိုး၊
အအေးခံသံမဏိဘား ribbed machine သည်ပတ်ပတ်လည်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကိုဖွဲ့စည်းရန်သံမဏိပတ်ပတ်လည်ရှိအရက်ဆိုင်များ၏မျက်နှာပြင်ကိုလှိမ့်သည်။ ကုန်ကြမ်းများ - အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိပတ်ပတ်လည်ဘားအသုံးပြုမှု - ဤစက်သည်အများအားဖြင့်အချင်း ၃-၈ မီလီမီတာဖဲကြိုးချည်များကိုလှိမ့်သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးလေဆိပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုသည်။ သီ ...
BRC ကွက်သည်ကွန်ကရစ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်လူကြိုက်များသည်။ ၎င်းသည်အထည်အားဖြည့်တင်းကွက်ကွက်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း၊ သွပ်သွင်းထားသောဂဟေဆော်သည့်ကွက်၊ gusset ဂဟေဆော်သည့်မျက်နှာပြင်ကွက်နှင့်ဂဟေဘီကွန်ကြိုးစသည်တို့ရှိသည်။ ဝါယာကြိုးကွက်စက်ယန္တရားများထုတ်လုပ်သည့်အနေဖြင့်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသင့်အားပြည့်စုံသောအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်ပါသည်။ 1. ဝါယာကြိုးဖြစ်စဉ်ကိုစက်; ...
Anti-glare mesh သည်အများအားဖြင့်အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၏အထီးကျန်ခါးပတ်အဖြစ်အသုံးပြုသောလူကြိုက်များသောဝါယာကြိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁။ အမြန်လမ်းတွင်ညအချိန်တွင်မောင်းနှင်နေစဉ်မြင့်မားသောရောင်ခြည်ကိုဖွင့်ရန်လိုသည်။ နှင့်ယာဉ်မောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ခါးပတ်အစိမ်းသည် Li ကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်
ကွက် Welding ကွက်စက်
ဒီနေ့အာဖရိကဖောက်သည်တွေအတွက်တစ်ခုတည်းဂဟေဆော်တဲ့စက်စက်ကိုတင်ပြီးသွားပြီ။ ၁။ ဤဂဟေဆော်ထားသောစက်၌သီးခြားကွက်လပ်ကွက်တစ်ခုရှိသည်။ သို့မှသာအလုပ်သမားသည်နောက်ဆုံးပေါ်အချောလိပ်လိပ်ကိုအလှည့်ကျစက်မှထုတ်ယူစဉ်ဆက်လုပ်နိုင်သည်။ 2. ဒီဂဟေစက်က c ...
ဝါယာကြိုးဖြောင့် & ဖြတ်တောက်စက်
ဝါယာကြိုးဖြောင့် & ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်လူကြိုက်များဝါယာကြိုးဖြစ်စဉ်ကိုစက်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်; ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောဝါယာကြိုးအချင်းအတွက်သင့်လျော်သောဖြောင့်စက်ဖြတ်စက်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ 1. 2-3.5mm ဝါယာကြိုးအချင်း: 2-3.5mm ဖြတ်တောက်ခြင်းအရှည်: မက်စ်။ ၂ မီတာဖြတ်ခြင်းမြန်နှုန်း - ၆၀-၈၀ မီတာ / မိနစ်အတွက် ...
မနေ့ကပဲ Straight wire ဆွဲစက်တစ်စုံကိုတင်ပြီးသွားပြီ။ ဖြောင့်ဖြောင့်သောသို့မဟုတ်ဝါယာကြိုးကင်းသောဝါယာကြိုးပုံဆွဲခြင်းအတွက်ထုတ်လုပ်သည်။ ဝင်ပေါက်ဝါယာကြိုးအချင်း 5.5mm, ထွက်ပေါက်ဝါယာကြိုးအချင်းသည် ...